Tontolon’ny fanabeazana :: Mpiasam-panjakana an’arivony hanokafana fanadihadiana • AoRaha
Tontolon’ny fanabeazana Mpiasam-panjakana an’arivony hanokafana fanadihadiana
Mandindona an’ireo mpiasam-panjakana tsy manara-dalàna ny sazy henjana. Mpiasan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak’asa (Mentp) manodidina ny efa-jato sy arivo no fantatra fa mampiahiahy satria tsy mbola fantatra mihitsy ny mikasika azy ireo taorian’ny fanisana natao. Tombanana ho misy matoatoa amin’izy ireo raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.
“Mbola mampiahiahy aloha ny mikasika azy ireo. Izany hoe mila fanamarinana any amin’ny toerana misy azy tsirairay, satria tsy azo lavina ny mety hisian’ireo mpiasam-panjakana matoatoa ao anatin’izy ireo. Misy ihany koa anefa ny efa maty; ireo tsy nahavita nanavao ny taratasy fifanarahana sy ny antony hafa.”, hoy Ravelonahina Dera Harimanana, miandraikitra ny fitantanana ilay kajimirindra “Augure “ natao hanarahana ny mpiasam-panjakana eo anivon’ity minisitera ity, ny alakamisy lasa teo, taorian’ny fampahafantarana ny fampiasana io kajimirindra io, teny Anosy.
Araka ny fanazavana dia mbola hisy sivana hatao mikasika an’ireo mpiasa tsy voaisa ireo. Araka ny didim-panjakana nivoaka kosa dia fanapahana karama avy hatrany no fantatra fa miandry ireo mpiasa voamarina fa matoatoa na tsy ara-dalàna. Mpiasa dimy amby valopolo sy sivinjato sy enina arivo sy sivy alina no voasoratra ao anatin’ny “Augure” ao amin’io minisitera io manerana ny Nosy, taorian’ny fanisana. Misy ireo tena amperin’asa miisa sivy arivo sy valo alina. Miisa dimampolo sy dimanjato ireo efa maty. Misy ihany koa ireo efa nisotro ronono sy tapitra ny fifanarahana arak’asany.
Marihina fa natao hanadiovana ny tontolon’ny asam-panjakana sy fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa isaky ny sampan-draharaha tsirairay ny fampiasana an’ity kajimirindra ity. Ny minisiteran’ny Asa , ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy no efa nametraka tamin’ny fomba ofisialy ny fampiasany an’io haitao vaovao io. Efa mampiasa izany ihany koa ny eo anivon’ny minisiteran’ny Toe-karena sy ny teti-bola.
Nandritra ny fidinana ifotony teny amin’ny Mentp kosa no nahafantarana fa mety hisy fetrany ny fampiasana ny kajimirindra “Augure”. “ Rehefa betsaka ny mampiasa azy, izany hoe, maro be ireo olona manara-maso dia hita fa sarotra ny fidirana ao amin’ny “Augure”. Ankoatra an’izany, mety ho betsaka ihany koa ireo olona afaka hanitsy ireo antontan’isa voafaritra ao raha tsy azo antoka ny lafiny fiarovana”
Fiainana mpanao hatsikana :: Manana talenta miafina hafa ry Etsetra Etsetra
Antenimierandoholona :: Nahemotra ny fifidianana ny lalàna momba ny fanoherana